Costa Rica: tafakatra 6.7% ny mpitsidika UK amin'ny 2017
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Costa Rica: tafakatra 6.7% ny mpitsidika UK amin'ny 2017
Febroary 16, 2018
Ny tarehimarika farany avy amin'ny Birao fizahan-tany Costa Rica (TIC) dia manondro fa 76,173 ny mpitsidika avy any Angletera tonga tao Costa Rica tamin'ny taona 2017 - maneho ny fitomboana 6.7% tamin'ny taona lasa. Io tarehimarika tsara io dia manamafy ny toerana misy an'i Angletera amin'ny maha tsena loharano lehibe indrindra an'i Costa Rica any Eropa.
Alemanina (70,960), France (69,803) ary Espana (69,782) dia manaraka an'i Angletera amin'ny isa mpitsidika 2017 any Costa Rica. Angletera ihany koa no tsenan'ny mpitsidika lehibe indrindra any Costa Rica tamin'ny 2016 (71,392), herintaona taorian'ny nanombohan'ny British Airways sidina mivantana teo anelanelan'i London Gatwick sy San José.
Rob Wilson, Solontenan'ny TIC any UK, dia naneho hevitra momba ireo tarehimarika ireo: “Faly izahay mahita ny fitomboan'ny mpitsidika mitohy avy any UK ka hatrany Costa Rica, izay nanampy betsaka tamin'ny làlan'ny BA. Ny firenena maitso amerikanina afovoany dia tena manome toerana ho an'ireo liana amin'ny fiainana dia sy ny tontolo mahavariana. Amin'ireto fananana voajanahary ireto dia antenainay fa hitohy izany fitomboana izany amin'ny ho avy. ”
Ny tsena Irlandey koa dia nahita fiakarana tsara tamin'ny taon-dasa. Mpitsangatsangana Irlandey 4,321 no nitsidika an'i Costa Rica tamin'ny 2017, + 8.6% raha oharina tamin'ny 2016. Tamin'ny fitambarany, Costa Rica dia niarahaba mpitsidika 2,959,869 manerantany tamin'ny taona 2017, fiakarana 1.2% raha oharina tamin'ny 2016.
Sakan'ny Ranomasina Karaiba sy ny Oseana Pasifika, Costa Rica dia manolotra traikefa nahafinaritra, fialan-tsasatra, fizahana ary fahasalamana. Manomboka amin'ny tandavan-tendrombohitra sy ala mando ka hatrany anaty ala rahona ary amoron-dranomasina maka rivotra, ny fahasamihafan'ny velaran-tany Costa Rica, ny toetrandro ary ny zava-boahary voajanahary dia manome traikefa tsy manam-petra ho an'ireo mpitsidika - ao anatin'izany ireo hetsika ara-pahasalamana maro ao anatin'ireny toerana mahafinaritra ireny.
Nanazava ny fampitandremana eTN momba ny Turkish Airlines: Mitohy ny fiaraha-miasa ACE MICE
Pobeda Airlines dia mikasa ny fitomboan'ny Rosiana avy amin'ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn
Las Vegas dia midika fa ny teny fandraharahana dia tsy teny filamatra fotsiny
Qatar Airways Cargo convoy dia mandefa fanampiana sy fitaovana fitsaboana any India
Vaovao momba ny dia any Alemana
Nofoanana indray i Munich Oktoberfest noho ny valanaretina COVID-19
Vaovao momba ny dia any Aostralia
Aostralianina mandeha avy any India no raisina ho toy ny olon-dratsy
WTTC ao amin'ny G20: Mandroso mihoatra ny COVID-19
Ny sekretera misahana ny fizahan-tany Kenyas, Najib Balala dia maniry ny hamokatra vaksinin'ny COVID maimaimpoana ho an'ireo orinasa afrikanina mpamokatra fanafody afrikanina